Intetho kasihlalo | Sichuan Mingtaishun Cemented khabhayithi Co., Ltd.
Ubuchule kunye nokuKhangela iNyaniso
Ndibulela ngokungazenzisiyo kubo bonke abahlobo abahoye iSichuan Mingtaishun Group. Ngenxa yokuqonda kwakho, ukuthembela, ukhathalelo kunye nenkxaso, iSichuan Mingtaishun Group iya kuqhubeka nophuhliso lwayo oluzinzileyo. Iqela leMingtaishun liya kuhlala lithembekile kwaye linyanzelise kwinto entsha kunye nenkqubela phambili kwishishini lesixhobo se-CNC ukoyisa ubunzima. Kule nkqubo, khange sibenalo nelincinci ixesha, kwaye sihlala sitolika ngombulelo kunye nobuchwephesha ukuba ishishini likaMingtaishun lizinikele "ekugxileni kwitekhnoloji yezixhobo, egxile kwiimfuno zabathengi, ukuqokelela ubulumko beqela, kunye nokuhlangabezana neemfuno zentlalo".
Eyasungulwa ngo-2011, iqela leMingtaishun liye lafumana utshintsho oluninzi kunye nophuhliso. Ixhasa amaxabiso asisiseko "olutsha kunye nokufuna inyaniso, ukuthembeka kwetekhnoloji, intsebenziswano kunye nokuchuma", kunye nembono "yokukhokela ixesha elitsha lezixhobo zokusika kunye nokuvula uhambo olutsha lwezixhobo zokusika". Libala injongo yoqobo kwaye uye phambili.
Xa sijonga emva kwilixa elidlulileyo, siyakwazi ukufezekisa impumelelo yanamhlanje ngenxa yexesha elikhulu lohlaziyo nokuvula, inkxaso nothando lwawo onke amacandelo oluntu, abasebenzi abathembekileyo nabazinzileyo, kunye nokuzinikela ngokungakhathali kwabantu baseMingtaishun. Ukulandela kunye nomzabalazo ongapheliyo.
Ukujonga imeko yangoku, sele sineqela elihlala lizama ukuziphucula, iqela elinamava, kunye netekhnoloji yokuqala yezorhwebo, izixhobo zemveliso kunye nezixhobo zovavanyo. I-Mingtaishun iye yaba ngomnye wabathengisi ababalaseleyo bezixhobo ze-CNC e-China, kwaye uthotho lweemveliso zaye Yindumiso emxhelo-mnye evela kubathengi abaninzi abachaphazelayo ikhuphe umoya weshishini likaMing Taishun "wokukhuthaza ubugcisa kunye nokulandela umgangatho ophezulu".
Ukujonga phambili kwikamva, sizibophelele "ekugxileni kwiimfuno zabathengi", ukuqonda ukubetha kwamaxesha, ukoyisa umoya wokusebenza nzima, ukufuna izinto ezintsha kunye notshintsho, kunye nokuya kwimishini enkulu "yokukhokela ixesha elitsha lokusika izixhobo kunye nokuvula uhambo olutsha lwezixhobo zokusika "qhubeka.
Ngenxa yamaphupha, ke yenza phambili. Ngobugcisa obutsha, ukuphuculwa kwemveliso enye, ukuphuculwa komthengi omnye, kunye nokuphuculwa kolawulo oluncinci, sigxila ekudaleni ixabiso kubathengi, ukudala ubutyebi kuluntu, kunye nokwenza ikamva kwinkampani nakubasebenzi!